Vaovao Samihafa Archives - Page 3 sur 4 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
12 juin 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Nifarana tanteraka tamin’ny volana mai 2012 lasa teo ny fampianara Apokalypsy izay nandeha tao amin’ny radio fanambarana Antananarivo fm 98.4 mhz. Toy ny mahazatra dia tamin’ny alalan’ny batisa lehibe no namaranana. Tao aorian’ny tany amin’nyLire la suite…
1 juin 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Ho an’ny FAM MANERANA NY NOSY Vondrom-bavaka rehetra Fiangonana rehetra Paroasy rehetra FAM France Foibe Nasionaly Fivoriambe Nasionaly 2012 Fanamarihana ny faha 15 taona FAM Nohon’ny fahasoavan’Andriamanitra dia ilazana mialoha isika fa raha sitrapon’Andriamanitra diaLire la suite…
18 avril 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana Apokalypsy teo amin’ny rezionaly Antananarivo ny sabata 14 Aprily 2012 lasa teo satria nisy indray ny batisa lehibe niarahana tamin’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol. Araky ny efa nampahafantarina antsika teto diaLire la suite…
30 mars 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Feno 10 taona tamin’ity taona 2012 ity ny nijoroan’ny fiangonana Apokalypsy tao Toliara. Nisy araka izany ny fivoriam-bavaka lehibe izay notanterahana tany an-toerana. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Sabata 24 Martsa 2012 lasa teo nyLire la suite…
29 février 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana Apokalypsy Antananarivo ny sabata 24 Febroary 2012 lasa teo. Tao aorian’ny kaoferansa lehibe nataon’ny pasitera Mailhol dia maro be ireo niroso tamin’ny ranon’ny batisa. Tao aorian’ny kaoferansa lehibe izay notanterahina tetsyLire la suite…
12 février 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Mitohy hatrany ny fitsidihina pastoraly ataon’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol sy ireo delegasiona miaraka aminy. Ny fiangonana Apokalypsy Antohibe Ambohidratrimo indray no novangiany ny sabata 11 Febroary 2012 lasa teo. Isaky ny mamangy ireo fiangonanaLire la suite…
9 février 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Efa ahitana fiangonana Apokalypsy avokoa amin’ny faritra 22 eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’izany ny faritra Toamasina. Tamin’ny 12 Desambra 1998 no nanatontosana ny batisa voalohany tao Toamasina. Io taona io ihany koaLire la suite…
Tao aorian’ny nitsanganan’ny antoko politika izay noforonin’ny pasitera Mailhol dia maro ny fanontaniana manitikitika ny maro. Nisy araka izany ny fihaonan’ny antoko Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara na GFFM tamin’ny mpanao gazety tamin’ity androanyLire la suite…
2 janvier 2012 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Hafatra avy amin’ny pasitera Mailhol ho fiarahabana ny fiangonana sy toromarika (audio) : Miarahaba antsika nahatratra ity taona vaovao 2012 ity. Enga anie mba samy hahita fahombiazana isika ary mba ho samy hahatafita ity taonaLire la suite…
27 décembre 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Fampianarana apokalypsy eto Madagasikara
Mitohy hatrany ny fampianarana ny boky Apokalypsy izay iarahana amin’i pasitera Mailhol, amin’ireo Radio Fanambarana rehetra eto Madagasikara. Ny herinandro lasa teo no vita ny tantaran’ny fiangonana fito, izay nahafantarana ny toetran’ny fiangonana nanomboka tamin’nyLire la suite…
Isan-tsabata dia misy hatrany ny fiaraha-mivavaka amin’ny fiangonana Apokalypsy rehetra manerana an’i Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina. Raha ny tetsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy dia maro hatrany ireo vahoakan’Andriamanitra tonga manatrika izay fotoam-bavaka izay.Lire la suite…
4 décembre 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Famaranana ny fanamarihana ny faha 5 taonan’ny fiangonana Alasora
Nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ny sabata 03 Desambra 2011 lasa teo ny fanamarihana ny faha dimy taona nijoroan’ny Fiangonana Apokalypsy Alasora. Mialohan’ny fotoam-bavaka dia nisy ny filaharam-be niarahana tamin’ny pasitera Mailhol sy ireo delegasiona niarakaLire la suite…
30 novembre 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Ny Sabata faha 26 ny volana Novambra 2011 dia tonga nitsidika ny fiangonana foibe tany FRANCE, ny Ray aman-dReny Loholona Ratsimbazafy Pierrot Olivier izay sady lehiben’ny ASA FAMPANDROSOANA eto Madagasikara. Nitondra ny fampaharezana ny harivaLire la suite…